TamilRockers (2020) - Azo antoka ve ity tranokala vaovao ity? Famerenana farany - Fialam-Boly
TamilRockers (2020) - Azo ampiasaina ve ity tranokala vaovao ity?
Ny sarimihetsika sy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra no loharanom-pahalalana mampihetsi-po indrindra izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona hamelombelona ny sainy sy hialana amin'ireo fihenjanana sy fahasosorana rehetra. Voaporofo fa ny loharanom-pialam-boly no fomba tsara indrindra hanamaivanana ny olana lehibe toy ny fihenjanana.
Isaky ny misy olona te handany ny fotoanany malalaka dia matetika ny mijery sarimihetsika mampiala voly mba hialana amin'ny fahafaham-po natrehin'izy ireo.TamilRockers dia tranokala torrent izay manampy amin'ny fanaparitahana sarimihetsika, seho na horonan-tsary tsy ara-dalàna.
Tranonkala piraty tsy ara-dalàna sy tsy ara-dalàna izay misy fanangonana sarimihetsika misy teti-bola lehibe an-tserasera. Araka ny loharanom-baovao sasany, alohan'ny famoahana sarimihetsika misy teti-bola lehibe dia mikasa ny hamoaka ilay sarimihetsika an-tserasera i TamilRockers amin'ny andro fisokafany ihany.
Ity tranokala ity dia mamela ny mpitsidika hikaroka sy hisintona sary mihetsika miaro ny zon'ny mpamorona amin'ny alàlan'ny rohy andriamby ary koa ireo rakitra torrentTany India, nasaina nosakanana ity tranonkala ity. Saingy, mbola manohy miasa ihany ny tranokala amin'ny alàlan'ny fanovana tsotra izao amin'ny lisitry ny adiresy tranonkala vaovao mba hialana amin'ny fiatrehana ireo manampahefana ao amin'ny governemanta.
Afaka mijery sarimihetsika amin'ny TamilRockers ve aho?
Ny fijerena fotsiny na ny fisintomana ny sarimihetsika avy amin'ny Tamilrockers dia tsy ara-dalàna satria manohana ny piraty ity tranonkala ity. Raha sendra miditra an'ity tranonkala ity ianao ary avy eo dia tratra amin'ny fomba hafa rehetra ary tsy maintsy mijaly noho ny sazy noho ny fandikana ny lalàna navoakan'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta.
Ary koa, ity tranonkala ity dia milaza fa tsy manan-jo amin'ny atiny izay nakarina ho hitan'ny mpampiasa na ampidininy. Rehefa mitsidika an'ity karazana tranokala ity amin'ny Internet ianao, dia atahorana hampidi-doza ny mombamomba anao. Noho izany, tadidio fa ny tranonkala toy izany dia tsy ara-dalàna ary tsy azo antoka ihany koa ny maka sary mihetsika.
Ka, raha mampiasa an'ity tranonkala ity ianao mijery karazana sarimihetsika , tokony hialanao fotsiny izany amin'ny ho avy raha tsy izany dia mety hahita olana ianao araka ny lalàn'i India.
Fandikan-dalàna azo sazy henjana ny piraty.
Azo antoka ve ny fampiasana ny Tamilrockers?
Tokony ho fantatry ny olona fa ity tranonkala ity dia fantatra fa tranonkala piraty izay mifanohitra tanteraka amin'ny fanjakan'ny governemanta. Saingy, hitantsika aza fa mbola mitsidika an'ity tranonkala ity amin'ny fomba maro ny olona, ​​na eo aza ny fandraràna azy.
Azo antoka fa tsy azo antoka ny fampiasana an'ity tranonkala ity satria nosakanan'ny Governemanta India io tranokala io.Raha mampiasa tranokala torrent ianao
tranonkala, heloka bevava izany. Aza hadino koa fa ny fampiasana tranokala toy izany dia mety hanenjika ny fitaovanao.
Rehefa mampiasa tranokala toy izany ianao dia mety hahita pop-up sasany. Izay no ahafahan'ireo tranonkala ireo mampiditra ny viriosy ao amin'ny fitaovanao ary raha vantany vao nahazo viriosy ao amin'ny rafitr'izy ireo ny fitaovana dia hiadana be ny fitaovanao. Mety hanimba ny processeur an'ny PC-nao koa io.
Raha tsapanao fampidinana sarimihetsika , ny hany mila ataonao dia mitady fotsiny ireo sehatra ara-dalàna ary sintomy ny sarimihetsika notadiavinao.
Mahazo misintona sarimihetsika avy amin'ny Tamilrockers ve isika?
Tokony ho fantatsika fa ny fampiasana tranonkala piraty dia voalaza fa fandikan-dalàna any India. Raha ny marina, tsy any India ihany fa amin'ny firenena maro hafa koa. Ny governemanta amin'ireo firenena ireo dia tsy mamela ny olona hitsidika tranonkala piraty toy izany.
Raha miresaka momba ny Tamilrockers isika dia tena noraran'ny governemanta India imbetsaka izany. Saingy, mbola manohy manova ny anaran-dry zareo ihany izy ireo ary manohy ny serivisin'izy ireo.
Betsaka ny olona miasa mafy amin'ny famitana ny sarimihetsika na ny andian-tranonkala misy azy ireo. Nefa, raha navoaka ny sarimihetsika ary tafaporitsaka tao amin'ireo tranonkala piraty toy izany, dia tena hampalahelo azy ireo izany. .
Araka ny fantatsika izao, ny fampiasana tranokala toy izany dia manafintohina ary manohitra ny lalàna satria mangalatra sarimihetsika ireo karazan-tranonkala ireo ary avy eo manompo anao ihany. Raha fintinina, Midika koa izany fa mangalatra ny atin'ny jiolahin-tsambo koa ianao ary mijery azy ireo. Zava-dehibe ny fahalalana fa ny atiny misy amin'ny tranokala dia manana zon'ny mpamorona. Noho izany, mety misy ny mety ho karazana hetsika mety hanoherana anao raha toa ka manana atiny piraty ao amin'ny fitaovanao ianao.
Ahoana ny fomba fiasan'ity tranonkala ity?
Mety mieritreritra ianao fa na dia voararan'ny governemanta aza ity tranokala ity, ahoana no ahafahana miasa io tranonkala io nefa tsy misy olana. Ny tena izy, ny tranokala TamilRockers dia tsy mampiantrano na inona na inona atiny izay misy ao amin'ny tranonkala.
Ny tranonkala dia mitarika ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny rohy ivelany. Ka afaka mijery sarimihetsika na horonantsary avy amin'ireo rohy ivelany ianao raha tsy misy fanelingelenana.
Na dia tsy mampakatra atiny misy piraty aza ilay tranonkala, dia manohana sy mampiroborobo ny atiny piraty izany. Ary koa, ny tranokala TamilRockers dia manohy manova tsy tapaka ny anaran'ireo tranokala hanohizana ny asany. Noho izany, noho ny fanampian'io, lavitra ny manampahefam-panjakana ny tranonkala noho ny rohy proxy samihafa.
Ny fampiasana tranonkala piraty hijerena sarimihetsika na seho piraty na horonan-tsary hafa dia mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna any amin'ny firenena maro. Raha sanatria ka tratra mijery sarimihetsika amin'ny fampiasana tranokala toy izany ianao dia mety hisy olana aminao atsy ho atsy. Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny fanabeazana ihany ary mikasa koa izahay ny hampahafantatra ny vahoaka mba hahafantatra azy ireo ny fampiasana ireo tranonkala piraty toa izany satria tsy ara-dalàna ny fampiasana an'ity tranonkala ity. Tsara kokoa aminao ny tsy mampiasa tranokala piraty ary mitady tranokala sasany ilainao mandoa vola mba ahafahanao misintona sarimihetsika na seho.
rahoviana no hiverenan'ireo mpizara Nintendo
tranokala sarimihetsika maimaim-poana inona no azo antoka
mahazo fehezan-dalàna miampy playstation miampy kaody
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra an-tserasera maimaim-poana nefa tsy misintona
mpianatry ny oniversite maimaim-poana amazon prime
mijery sarimihetsika navoaka maimaim-poana amin'ny Internet